Jr NTR cidna iskama celin karto madaama filimkiisa Aravindha Sametha si waali ah USA iyo Australia kaga furmay – Filimside.net
Jr NTR cidna iskama celin karto madaama filimkiisa Aravindha Sametha si waali ah USA iyo Australia kaga furmay
Young Tiger Jr NTR awood ahaan cidna lama tartami karto madaama Aravindha Sametha wacdaro waali ah ka sameeyay USA iyo Australian Boxoffice ganacsi ahaan waana arin la wada filaayay madaama Super Star-kan awoodiisa marwalbo sare usii kaceyso.
Waxaa la yaab noqotay in NTR filimkiisa Aravindha Sametha Arbacadii gelinka dambe USA laga daawaday inuu keenay $ 791,021 (5.85 Crore) waxaana laga daawaday 218-meelood ama goobood oo at tiyaataro kala duwan ku yaaliin.
Waa ganacsi waali ah maalin barkeeda in NTR filimkiisa 5.85 Crore uu USA Boxoffice kasoo xareeyo waxayna midaan caddeyn u tahay in $2.5m ilaa $3m USA ka keeni doono Khamiis ilaa Axad ganacsigiisa guud haddii la isugu daro.
Sidoo kale NTR filimkiisa Aravindha Sametha Australia si waali ah ayuu kaga furmay wuxuuna Khamiistii ka keenay A$ 128,740 ($67.63 Lakh) waxaana laga daawaday 35-meelood ama goobood waana arin waali ah si kale haddii loo dhigo xogtaan waxay noqoneysaa NTR filimkiisa halkii shaashad ama tiyaatar laga daawaday inuu kasoo xareeyay A$ 3,678!
Sidoo kale filimka Aravindha Sametha wuxuu kaga bilaawday Australian Boxoffice kaalinta 9-aad taasi oo ka dhigan in Top 10-ka Australian Boxoffice-ka filimkan si toos ah maalinta kowaad usoo galay asigoo safka hore ilaa Top 5 gaari doono maalinta Axada ah.
Waxaa Aqrisay 429